Sidee loo doortaa bandhigga ganacsiga tafaariiqda ah? - TCN
Sidee loo doortaa bandhigga ganacsiga tafaariiqda ah?
Waqtiga: 2020-01-09 Hits:
Sannadkii 2016-kii, iyadoo ay sare u kacday fikradda tafaariiqda aan lala socon, maahan oo keliya shirkadaha mashiinnada wax iibiya ee iskaa wax u qabso caan ku noqday, laakiin sidoo kale warshadaha bandhig is-adeegga ah.
Bandhig, shirkadaha ka socda cilmi baarista qalabka iyo horumarinta, isku xirka silsiladda saadka, qaabeynta qaabeynta carwada, dhismaha iyo wixii la mid ah waa inay maal gashadaan tamar badan iyo raasumaal.
Haddii aad la kulanto ganacsi bandhig wanaagsan, maalgashiga oo dhami waa u qalmaa. Hadaanay ahayn, waxaad waayi doontaa lacag oo aad shaqaysaa. Marka sidee loo doortaa bandhig wanaagsan?
CVS-ka 2019 ee Shanghai
Markaynu u kuur galno dhammaan noocyada bandhigyo aad u wanaagsan, weli waxaan soo koobi karnaa khibradaha qaarkood. In kasta oo iyagu aysan daruuri ahayn inay dhammaan sax yihiin, haddana sidoo kale dhammaantood qiimo ayey u leeyihiin tixraac.
Showga 2019 NAMA ee Mareykanka
Khibrad 1: Abaabulaha
Waa habka ugu toosan ee loo arko qabanqaabiyaasha. Guud ahaan, waxaa jira abaabule xoog leh oo ka dambeeya bandhig xoogaa guul ah, ama shirkad caan ah oo carwooyin soo bandhigta, ama urur bulsheed caan ah (urur rasmi ah), oo aan la mid ahayn qabanqaabiyaasha qaar ka mid ah bandhigyada yaryar.
2019 VendExpo oo ku taal magaalada Moscow
Khibrad 2: Calaamadaha ka qayb qaadashada
Bandhigyada aadka u fiican badanaa waxay leeyihiin tiro badan oo noocyo waaweyn ah. Sidaa darteed, marka la qiimeeyo tayada bandhigga iyo astaamaha ka qaybgalaya, waxaan ogaan karnaa inay tahay mid ka mid ah tilmaamayaasha muhiimka ah haddii ay jiraan shirkado ganacsi oo waaweyn oo ka qaybgalaya bandhiga.
Khibrad 3: Taariikh
Bandhigyo heer sare ah ayaa guud ahaan lagu ururiyaa waqti dheer. Sidaa darteed, marka la dooranayo bandhig, xayeysiinta iyo taariikhda horumarka ee qabanqaabiyaha waa in la arkaa, taas oo yareyn doonta suurtagalnimada in lagu siriyo.
Khibrad 4: Wada-hawlgalayaasha
Bandhigyada wanaagsan badanaa waxay leeyihiin la-hawlgalayaal wanaagsan, sidaa darteed markaan dooranno bandhigyo, waxaan sidoo kale u baahannahay inaan aragno xaaladda lamaanayaasha bandhigga.
Khibrad 5: Mawduuc iyo xirfad-yaqaannimo
Bandhig wanaagsan, ayadoon loo eegayn hodantinimada bandhigyada iyo xirfad ahaanta shirarka goobta iyo kulammada, guud ahaan waxay horseedi kartaa jihada horumarka ee warshadaha.
Khibrad 6 Qaabka dacaayadaha
Xayeysiinta guud ee bandhigyada aadka u wanaagsan waa mid aad u adag, oo aan ka badbadin kana bixin mowduuca, kaasoo guud ahaan lagu fuliyo hagida carwada sanadkaas. Sidaa darteed, haddii qaabka dhiirrigelinta bandhig sidoo kale macnaheedu yahay heerka bandhiggan. Haddii carwadu ay leedahay oo keliya dhiirrigeliyayaasha iyo aan lahayn jihada horumarinta warshadaha, waxaad u baahan tahay fiiro gaar ah.
Khibrad 7: Madaxbanaanida carwada
Bandhigyada aadka u fiican guud ahaan waa kuwo aad u madax-bannaan, iskuna jira cabir ahaan, marar dhif ahna ku tiirsan bandhigyo kale. Haddii aad la kulanto tiro badan oo cinwaanno caan ah oo la mid ah, laakiin iyagu gabi ahaanba kama madax-bannaan yihiin goobta, kaliya mid u dhiganta, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato. Dabcan, tani maahan mid dhammaystiran. Xaqiiqdii, sidoo kale waxaa jira kiisas qaarkood oo bandhigga ugu weyni uu xoog badan yahay iyo bandhigga taageeraya sidoo kale waa mid aad loogu guuleystay, laakiin waa dhif iyo naadir. Sidaa darteed, waxaan u baahanahay inaan fiiro gaar ah u yeelano xulashada bandhigga.
HOREIsbedelka Cusub ---- Mashiinka Iibinta Quraacda
NEXT TCN: Dib u jaleecida 2019 iyo rajada 2020